Wararkii Ugu Muhiimsanaa Ee Ay Maanta Wargaysyada England, Spain, Italy , France Iyo Germany Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda. – WWW.Gool24.net
Wararkii Ugu Muhiimsanaa Ee Ay Maanta Wargaysyada England, Spain, Italy , France Iyo Germany Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda.
Kooxaha horyaalada Yurub ayaa dagaal wayn ugu jira sidii ay uklaa hororsan lahaayeen xidigaha ugu tayada fiican ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda Yurub ama aduunka laga heli karo. Kooxaha horyaalka Premier Leaque-ga ayaa haddba hogaanka u qabtay lacagta lagu kharash gareeyay suuqa kala iibsiga iyaga oo kaga sareeya dhamaan horyaalada Yurub.
Manchester United, Manchester City iyo Liverpool ayaa haddaba saxiixyo muhiim ah sameeyay laakiin Chelsea iyo Arsenal ayaa ku dhaw in ay dhamaystiraan xidigaha noqon doona saxiixyada kowaad inkasta oo ay Gunners hal saxiix si xor ah ku samaysay.
Dhinaca horyaalka Talyaaniga AC Milayan ayaa dhigaysa wacdaro layaableh balse wali kooxaha kale ayaa daawanaya suuqa kala iibsiga halka kooxaha Spain ayna wali samayn saxiixyo muhiim ah balse waxay ku jiraan wada xaajoodyo iyo dagaal hoose.
Haddaba shabakada Gool24.net ayaa isha soo marisay wararkii ugu muhiimsanaa ee ay wargaysyada ugu wayni ka qoreen suuqa kala iibsiga ee dalalka Spain, England, France, Germany iyo Italy halkan ayaanu idiinku soo koobnay kuwii ugu muhiimsanaa.
Arsenal ayaa bartilmaameedsanaysa xidiga kooxda Barcelona ee Rafinha kaas oo sheegay in uu mustaqbalkiisu furan yahay. Barcelona ayaa horeba u doonaysay in ay Rafinha ka iibiso Arsenal si ay Gunners uga heli karto saxiixa difaaca midig ee Hector Bellerin oo ka mid ah liiska ciyaartoyda Camp Nou laga doonayo xagaagan laakiin sidoo kale Juventus ayaa Arsenal kula tartamaysa xidigan boosaska badan ka ciyaari kara ee Rafinha. (Marca)
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zidane ayaa bartilmaameedka kowaad ka dhiganaya in uu xagaagan la soo saxiixdo Eden Hazard oo 26 sano jir ah iyo waliba da’yarka kooxda AS Monaco ee Kylian Mbappe oo 18 ah iyada oo waliba Alvaro Morata iyo James Rodirguez la filayo in ay Bernabeu ka baxaan(Diario Madrista)
Manchester City ayaa ku sii dhawaanaysa in ay heshiisaka Dani Alves dhamaystirto kadib markii ay Juventus si rasmi ah ugu dhaaqday in uu kooxdeeda ka baxay. Guardiola ayaa doonaya in Dani Alves uu Etihad Stadium kula midoobo sidoo kale Man City ayaa ku dhaw saxiixa Kyle Walker. (Football Italia)
Bartilmaameedkii kooxda Tottenham Hotspur ee Mariano Diaz oo ay Real Madrid diyaar u tahay in ay iska iibiso ayaa ku biiri kara kooxda horyaalka Talayaaniga ee Sampdoria inkasta oo si xoogan loola xidhiidhianayay kooxda Lyon. Da’yarkan ayay Madrid ku iibinaysaa 5-6 milyan oo gini.(Calciomercato)
Madax waynaha kooxda Bayern Munich ee Uli Hoeness ayaa meesha ka saaray suurtogalnimada ay kooxdiisu kula soo wareegi karto xidiga kooxda Arsenal ee Alexis Sanchez wuxuuna sheegay sheegay in 100 milyan oo euros aan lagu kharash garayn karin ciyaartoy 29 ama 30 sano jir ah wuxuuna xusay in ay xidigo da’yar ah doonayaan. (Kicker)
Borussia Monchengladbach ayaa xiisaynaysa in ay Tottenham gacmaheeda ka saarto xidiga ku fashilmay ee Vincent Janssen. Borussia Monchengladbach ayaa xidiga ree Holland ku doonaysa 12.2 milyan gini iyada oo doonaysa in ay koxodeeda ku soo xoojiso.(Bild)
Iyada oo Paris Saint-Germain ka cabsi qabta in Marco Verratti uu Barcelona ku biiro xagaagan ayay sarre u qaaday hamigii ay ku doonaysay in ay kula soo wareegto xidiga Manchester United diirada u saarnaa ee Fabinho kaas oo ka tirsan AS Monaco. Fabinho ayaa ka ciyaari kara khadka dhexe iyo difaaca midigi waxayna PSG sarre u qaaday rabitaankii ay xidigan ree Brazil ku doonaysay.. (L’Equipe)
Goolhayaha Arsenal ee David Ospina ayaan ku biiri doonin kooxda Claudio Ranieri ee Nantesm inkasta oo ay jireen warar hore u soo baxay oo muujinayay in Ospina uu kooxdan ku biirayo. David Ospina ayaa kaydka uga jira Petr Cech wuxuuna doonayaa in uu Emirates Stadium ka baxo. (L’Equipe)
Chelsea ayaa dalab 30 milyan oo gini ah ka gudisay difaaca kooxda Roma ee Antonio Conte iyada oo waliba wakiilkiisa Sahr Senesie uu London u soo duulayo si uu Chelsea ula yeesho wada xaajood dheeraad ah. Antonio Conte ayaa doonaya Rudiger uu safka kooxdiisa ku soo xoojiyo.(Sky Sports)
Manchester United ayaa Barcelona ka iibin doonin xidiga khadka dhexe ee Andrer Herrera iyada oo Balaugrana qorsha labaad ka dhiganaysa saxiixa Herrera haddii ay waydo Marco Verratti oo muhiimada kowaad hadda u ah. 27 sano jirkan ree Spain ayaa boos joogto ah ka helay shaxda Mourinho waxayna United doonaysaa in uu kooxdeeda ka sii mid ahaado. (Independent)
Xidiga kooxda Chelsea iyo xulka qaranka Spain ee Pedro Rodriguez ayaa sheegay in ay kooxdiisa ku adkaan doonto buuxinta booska Diego Costa wuxuuna xusay in aanu waligii arkin gool dhaliye la mid ah 28 jirkan uu Antonio Conte qorshihiisa ka saaray ee Diego Costa. (Daily Mirror)
Liverpool ayaa dalabkii ugu horeeyay u daraysa kooxda RB Leipzing ee horyaalka Germany waxayna ka doonaysaa xidiga khadka dhexe ee Naby Keita. 22 jirkan ayuu Klopp doonayaa in uu khadka dhexe ee kooxdiisa ku soo xoojiyo balse RB Leipzing ayaa xidigan ku qiimaysay 70 milyan oo gini balse Reds ayaa qiimo ka hoosaya ku dalbanaysa. (Daily Mirror)
Kooxda AS Monaco ayaan doonayn in ay iska iibiso xidiga ay dalabkii ugu horeeyay ka soo diiday Arsenal ee Thomas Lemar waxayna Monaco xidigan ku soo dartay ciyaartoyda kooxdeeda ee ay ku soo bandhigtay maaliyada cusub ee ay xili ciyaareedka cusub kooxdeedu ku ciyaari doonto. (Independent)
Manchester United ayaa luminaysa xidigii uu Mourinho liiska uu doonayo ku darsatay ee Ivan Perisic iyada oo Inter Milan buuxisay lacagtii 30 ka milyan ee euros ahayd ee UEFA uga baahnayd si ay ugu hogaansanto sharciga dhaqaale wanaaga UEFA waxayna horeba Man United ugu qabtay in ka hor July 1 ay xidigan kula wareegi karto 50 milyan oo euros waxaana waqtigan ka hadhay saacado kooban.(Daily Telegraph)